Home › What's New › Press Release- 2nd October, 2018
Press Release- 2nd October, 2018
A two-year long celebration of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi was launched by the Embassy of India in Yangon with an event on 2nd October held at the Sule Shangrila Hotel.
The event began with the lighting of the lamp by Sitagu Sayadaw Dr. Ashin Nyanissara, H.E. U Tin Maung Tun, Speaker of Yangon Region Hluttaw, H.E Mr. Vikram Misri, Ambassador of India to Myanmar, Dr. Thant Myint U, renowned writer, historian & Chairman, Yangon Heritage Trust and U Myint Thu, Managing Editor, Myanmar Heritage.
The welcome remarks at the event were delivered by Ambassador Vikram Misri, followed by words by Venerable Sitagu Sayadaw Dr. Ashin Nyanissara, who spoke about the life and work of Mahatma Gandhi.
Dr. Thant Myint U,arecipient of the Padma Shri Award, one of the most important civilian awards of India, delivered the Mahatma Gandhi Memorial Lecture.
Asapart of the celebrations, Mahatma Gandhi’s favourite Gujarati bhajan (a devotional song), “Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je”, was sung by Ms May Thu Khine, along with the the popular Ugly Music Band from Myanmar. This bhajan was originally composed by Saint Narsinh Mehta in the 15th century. Mahatma Gandhi listened to this bhajan since his childhood and was deeply inspired by it.
Commemorative stamps to mark Mahatma Gandhi’s 150th birth anniversary celebrations were also released at the event. The Myanmar translation of his autobiography, “The Story of My Experiments with Truth”, translated by U Hane Latt and published by U Myint Thu of Myanmar Heritage, was unveiled at the event.
The event was attended by over 300 people from the diplomatic corps, academics, friends of India, media and the Indian diaspora.
မဟတ္တမဂန္ဓီ၏ နှစ်(၁၅၀)ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် (၂)နှစ်တာကာလအတွင်း အခမ်းအနားများကျင်းပခြင်းအား ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်၌ ၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယသံရုံး၊ ရန်ကုန်မြို့မှ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပါ သည်။
အခမ်းအနားအား သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိဿရ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်ထွန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri, နာမည်ကျော်စာရေးဆရာ သမိုင်းပညာရှင်နှင့် ရန်ကုန်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦး နှင့် Myanmar Heritage ၏ မန်နေးဂျင်းအယ်ဒီတာ ဦးမြင့်သူတို့မှ ဆီမီးထွန်းညှိပြီး စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri,မှပြောကြားခဲ့ပြီး သီတဂူဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိဿရမှ မဟတ္တမဂန္ဓီ၏ဘ၀နှင့်လုပ်ဆောင် ချက်များအား မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏မြိုပြနိုင်ငံသားများ အားချီးမြှင့်သော အရေးအကြီးဆုံးဆုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Padma Shree Award အားလက်ခံရရှိထားသော ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးမှလည်ှး မဟတ္တမဂန္ဓီအမှတ်တရ ဟောပြောခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားအစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် မဟတ္တမဂန္ဓီ နှစ်သက်သော ဂူဂျာရတီဘဂျန်သီချင်း “Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je” သီချင်းအား တေးသံရှင် မမေသူခိုင်မှ မြန်မာနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် Ugly Music Band နှင့်တွဲဖက်သီဆိုခဲ့ ပါသည်။ ဤသီချင်းအား(၁၅)ရာစုနှစ်အတွင်း Saint Narsinh Mehta မှရေးဖွဲ့ခဲ့ပြီး မဟတ္တမဂန္ဓီသည် ယခုသီချင်းအား ကလေးဘ၀မှ စတင်ကာကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပြီး သူ၏ဘ၀ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သောသီချင်းလည်းဖြစ်သည်။
မဟတ္တမဂန္ဓီ၏ နှစ် (၁၅၀) ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အမှတ်တရတံဆိပ်ခေါင်းကိုလည်း စတင်မိတ်ဆက် ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားအစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် သူ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်ဖြစ်သော The Story of My Experiments with Truth by Mohandas K. Gandhi” ကိုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားသော စာအုပ်အား စတင်မိတ်ဆက် ဖြန့်ချီခဲ့ပါသည်။ ထိုစာအုပ်အားဘာသာပြန်ဆိုသူမှာ ဆရာ ဦးဟိန်းလတ်ဖြစ်ပြီး ဦးမြင့်သူ (Myanmar Heritage) မှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ သံတမန်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏မိတ်ဆွေများ၊ မီဒီယာများနှင့် အိန္ဒိယနွယ်ဖွား များ စုစုပေါင်း (၃၀၀) ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်။